musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Yepasirese hotera inoda hukuru hwekupokana nemakwikwi emitengo
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vafambi vanodzokera kune ndege kana kurova mugwagwa wezororo rinodiwa-kubva kubasa-kubva-kumba monotony uye kuwandisa kweNetflix.
Musi waJune 25, 2021, vanhu 2,137,584 vakapfuura nendege dzeUS, sekureva kweTSA.
MuUS, uko matunhu mazhinji nemanisiparati vachiramba vachizorodza maPROOT protocol, mari yemahotera yakaramba ichienderera mberi muna Chivabvu
Mahotera eEuropean anosiya mamwe matunhu nyika zhinji dzichiramba dzichishandisa mirawo inokanganisa kudzoka kwekufamba.
Nedenda repasirese richiratidza zvimwe zviratidzo zvekuregedza, indasitiri yehotera pamwe iri kukohwa mubairo, sezvo vafambi vanodzokera mundege kana kurova mugwagwa wezororo rinodiwa-kubva kubasa-kubva-kumba monotony uye kuwandisa kweNetflix. Indasitiri yehotera inofara kuvagamuchira zvakare, asi kuenderera mberi kwekushomeka kwemari - chigadzirwa chevamwe zvikamu zvisati zvadzoka nemufaro, senge muboka neboka - zvinowedzeredzwa nemari inodhura uye musika wevashandi wakaoma, uri mugumisiro pazasi mutsara.
Iyo US Push
Musi waChikumi 25, 2021, 2,137,584 vanhu vakapfuura nendege dzeUS, sekureva kweTSA, nhamba yaive 78% yezvese muna Chikumi 25, 2019, uye 237% kupfuura yaJune 25, 2020. Vanhu vari kufamba zvakare, izvo zvinoreva kuti vari kugara kumahotera zvakare.
Mu USA, uko matunhu mazhinji nemanisiparati vachiramba vachizorodza maPROID protocol, mari yakaenderera mberi nekufamba kwavo muna Chivabvu, neRevPAR yakakwira 539% panguva imwechete gore rapfuura, asi zvakadaro 51% yakaderera pane Chivabvu 2019. Nemakamuri emari anofambiswa nechikamu chekuzorora. , mari yese yakateverwa, kusvika pamadhora zana nemakumi maviri nemaviri nemana pane inowanika kamuri, iyo 127% inowedzera pamusoro penguva imwecheteyo gore rapfuura.
Mari yevashandi yakakwira kusvika pamadhora makumi maviri paimba inowanikwa kubva muna Chivabvu apfuura, mutengo unofanirwa kuramba uchiwedzera sezvo varidzi vemahotera vanoona kuti vanofanirwa kuburitsa zvimwe uye kuwedzera zvinokurudzira kukwezva vashandi vangangodzokera kumashure kumabasa ekugamuchira vaeni kana vakachinja basa. nzira.
Gross yekushanda mashandiro pane inowanikwa imba yakarova $ 40.55 muna Chivabvu, iyo 319% inowedzera pamusoro penguva imwecheteyo gore rapfuura, asi 63% yakaderera kupfuura May 2019.
Mahotera eEuropean anosiya mamwe matunhu nyika zhinji dzichiramba dzichishandisa mirawo inokanganisa kudzoka kwekufamba. Muna Chivabvu, mahotera aigona chete kuunganidza TRevPAR yemadhora makumi masere nemakumi mapfumbamwe nemasere, izvo zvakatungamira mukukanganisa-kunyangwe GOPPAR yeUS $ 49.83, iyo, kunyangwe iri yakaderera zvakanyanya, yaive mwedzi wekutanga wepundutso wakanaka mudunhu kubva munaGunyana 2.52.
Yese mari yemubhadharo mumwedzi yakarova € 23.76, yaive 46.8% yakakwira kupfuura panguva imwe chete gore rapfuura, uye chete € 6 pasi pemakamuri akazara RevPAR.
APAC Yakadzikama Simuka
MuAsia-Pacific, kufamba kwakasimba mudzimba kuri kukanganisa zvakanyanya mashandiro ehotera enharaunda. KUDZOKESHA mumwedzi wakarova $ 59.07, yaive 141% yakakwira kupfuura panguva imwechete gore rapfuura. Yakasimbiswa neinenge 50% yekugara uye kuwedzera ADR, iyo yakarova $ 118 mumwedzi. TRevPAR yemadhora 106.39 yaive chigadzirwa chekuenderera mberi kwekuwedzera kwemari yekubatsira, sezvo F&B RevPAR yakarova $ 40.77 mumwedzi waMay, 152% yakakwira kupfuura panguva imwechete gore rapfuura.
Kuchera mumari kwaive pamusoro pemitengo, iyo, pamadhora 30.26 paimba inowanikwa, yaive yakakwira 44.9% panguva imwechete gore rapfuura uye $ 12 yakaderera pane Chivabvu 2019. GOPPAR mumwedzi yakauya iri $ 27.55, inokwana 1,040% yakakwira kupfuura May 2020 , asi zvakadaro iri pasi pehafu yaMay 2019.
Middle East Inoita Mako
Saizvozvowo neAPAC, Middle East iri kukwira yakanaka rebound kumushure kwemazinga akakwira uye kuwedzera kwekugara KUPARADZWA mumwedzi kwakanyorwa pa $ 76.57, iyo 222% kuwedzera pamusoro pegore rapfuura, zvichibatsira kutungamira kuTrevPAR yemadhora zana nemakumi masere nemasere, iyo kuwedzera mazana masere nemakumi maviri nesere muzana panguva imwechete gore rapfuura.
Zvichakadaro, sezvo mutengo wevashandi uchiramba wakadzikama, uchingonyara madhora makumi mana paimwe nzvimbo inowanikwa, GOPPAR yakarova $ 40 mumwedzi, 37.29% yakakwira kupfuura panguva imwechete gore rapfuura. Middle East ikozvino yave nemwedzi gumi yakateedzana yeyakajeka purofiti kuita.